Mbola Mpianatra Izy, Kanefa Nahavita Nandroaka Manampahefam-panjakana Ambony Ity Mpanao Gazety Slovenina Ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2017 18:14 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Français, Magyar, English
Lea Majcen. Sary: Facebook
Nanjary olo-malaza tampoka teo i Lea Majcen, mpanao gazety ao Slovenia, rehefa nahasanganehana an'ilay manampahefam-panjakana Tilen Smolnikar tamin'ny fanontaniana fototra tamin'ny antsafa momba ny asany amin'ny maha filohan'ny sehatry ny angovo azo havaozina azy ao amin'ny firenena. Ny ampitson'ny resadresaka, nandroaka an'i Smolnikar avy hatrany ny minisiteran'ny foto-drafitrasa Slovenina.
Tamin'ny 16 Febroary, nitarika lahavolana henoim-bahoaka momba ny famatsiam-bola ny loharanon'angovo azo havaozina, tahaka ny milina fanodinana rivotra ao Brdo, akaikin'i Kranj i Smolnikar. Taorian'izany, niezaka nitarika resadresaka i Majcen, saingy tsy nahavita namaly ireo fanontaniana tsotsotra am-polony momba ny lahavolana sy ny angovo azo havaozina i Smolnikar.
Raha niresaka tamin'ny fahitalavitra Kroaty RTL taty aoriana, nilaza i Majcen fa nanapa-kevitra hamoaka ny antsafa ny fampahalalam-baovao noho ny tombontsoam-bahoaka, satria mazava fa tsy manana fahalalana fototra momba ny sehatra voalaza fa ananany fahaizana manokana i Smolnikar.
Tsy nampiasa afa-tsy, fanontaniana, fitaovam-piadiana matanjaky ny mpanao gazety izahay. Tany am-boalohany, nihevitra aho fa matahotra hiseho vahoaka izy, satria indraindray ny tenako manokana ohatra dia hendratrendratra rehefa anoloan'ny fakantsary. Na izany aza, hita mazava fa tsy manana fahalalana izy. Rehefa niverina tao amin'ny efitra fanoratam-baovao aho, dia nanapa-kevitra handefa ny antsafa izahay satria tsy azo ekena izany ho an'ny manampahefam-panjakana izay mandray karama goavambe. Tena tsotra anefa ireo fanontaniana.
Vao enimbolana monja izay i Majcen no niasa tamin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety amin'ny fahitalavitra, raha niditra tao amin'ny Fantsona ho mpanao gazety mpiana-draharaha izy. Mbola mpianatra eny amin'ny oniversite izy. Nilaza i Majcen fa mandray karama 2 400 euro isam-bolana i Smolnikar amin'ny maha mpiasam-panjakana azy.
Noroahin'ny fanjakana i Smolnikar tamin'ny 17 Febroary, izay niteraka tabataba kely teo amin'ny haino aman-jery manerana ny faritra Yogoslavy taloha. Nitatitra ny vaovao toy ny tranga tsy fahita firy amin'ny tamberin'andraikitra ara-politika ireo fampahalalam-baovao ao Kroasia, Bosnia, ary Makedonia.
Nidera ny nataon'i Majcen ihany koa ireo mpiserasera aterineto manerana ny faritra. Nizara ny vaovao i Dunja Mijatović, solontenan'ny OSCE misahana ny fahalalahan'ny haino aman-jery:
Slovenia: Nahavita nandroaka mpanao politika tamin'ny asany noho ny fanontaniana maromaro monja ilay mpanao gazety Lea Majcen (Tatitry ny Radio Sarajevo)
Na dia nilaza aza ny tatitra sasany fa voaraoka i Smolnikar, fantatra fa nafindra asa hafa ao anatin'ny minisiteran'ny foto-drafitrasa fotsiny izy.
Tamin'ny fanehoan-kevitra momba ny antsafa, nangataka fandraisana andraikitra bebe kokoa avy amin'ny governemanta ireo Slovenina marobe.
Firy ny isan'ireo mpitantana ao amin'ny minisitera isan-karazany, iza no tahaka an'i Tilen Smolnikar? …Be haitraitra, feno fitiavan-tena manana karama 2.500 euros..?